Ramba Wakaisa Pfungwa Dzako Pauchangamire hwaJehovha | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kamba Kannada Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKenya Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Vanhu [ngavazive] kuti imi, mune zita rokuti Jehovha, Imi moga ndimi Wokumusorosoro kumusoro kwenyika yose.”​—PIS. 83:18.
NZIYO: 9, 22
Nei kurevererwa kweuchangamire hwaJehovha iri nyaya inokosha kuvanhu vese?
Jobho akatsigira sei uchangamire hwaJehovha; asi akaita chikanganiso chipi?
Ndedzipi dzimwe nzira dzinokosha dzatinoratidza nadzo kuti tinotsigira uchangamire hwaJehovha?
1, 2. (a) Inyaya ipi inokosha kuvanhu vese? (b) Nei tichifanira kukoshesa nyaya iyoyo?
VANHU vakawanda mazuva ano vanokoshesa mari. Vanoisa pfungwa dzavo pakuunganidza upfumi kana pakuchengetedza zvinhu zvavainazvo. Vamwe vanokoshesa mhuri, utano, kana kuti zvinhu zvavanoda kuita muupenyu.
2 Zvisinei, nyaya inokosha zvikuru kwatiri tese ndeyekurevererwa kweuchangamire hwaJehovha. Tinofanira kungwarira kuti pfungwa dzedu dzisabva panyaya iyi inokosha. Izvozvo zvingaitika sei? Tinogona kutanga kunyanya kufunga nezvezvinhu zvatinoda zuva nezuva zvekuti tinokanganwa kuti kurevererwa kweuchangamire hwaMwari kunokosha zvakadini. Kana kuti tinogona kubvumira matambudziko edu kuti atitadzise kuisa pfungwa panyaya iyoyo inokosha. Asi kana tichikoshesa chaizvo kurevererwa kweuchangamire hwaJehovha, tichakwanisa kutsungirira matambudziko edu ezuva nezuva. Uye izvozvo zvichatiswededza pedyo naJehovha.
NEI NYAYA YACHO ICHIKOSHA KUDARO?
3. Satani akatii nezvekutonga kwaMwari?
3 Zvakaitwa naSatani Dhiyabhorosi zvakamutsa mubvunzo wekuti: Jehovha ane kodzero yekutonga here? Satani anoti kutonga kwaMwari kwakaipa uye kuti Jehovha haadi kuti zvisikwa zvake zvinyatsonakidzwa neupenyu. Maererano nezvakataurwa naDhiyabhorosi, vanhu vaizova nemufaro uye vaizorarama upenyu huri nani vachizvitonga. (Gen. 3:1-5) Nemashoko ake, Satani aireva kuti hapana munhu akanyatsovimbika kuna Mwari uye kuti kana munhu akaomerwa, anoramba kutongwa naJehovha. (Job. 2:4, 5) Nemhaka yezvakataurwa naDhiyabhorosi, Jehovha ari kupa vanhu nguva yekuti vaone kuti kurarama vasingatongwi naMwari kunorwadza.
4. Nei nyaya yeuchangamire ichifanira kugadziriswa?
4 Asi Jehovha anoziva kuti zvakataurwa naDhiyabhorosi ndezvenhema. Saka nei Mwari akasiya nyaya yacho ichienderera mberi, achipa Satani mukana wekuratidza kana zvaakataura zviri zvechokwadi? Vanhu nengirozi vane zvavanoita pakupindura mubvunzo iwoyo. (Verenga Pisarema 83:18.) Vanhu vaviri vekutanga vakaramba kutongwa naJehovha uye kubvira panguva iyoyo vanhu vakawanda ndizvo zvavari kuitawo. Izvi zvinogona kuita kuti vamwe vafunge kuti zvakataurwa naDhiyabhorosi ndezvechokwadi. Chero bedzi vanhu kana ngirozi vasina chokwadi nenyaya yeuchangamire, hapazovi nerugare nekubatana zvechokwadi. Asi kana uchangamire hwaJehovha hwarevererwa, vanhu nengirozi vachazviisa pasi pekutonga kwake kwakarurama nekusingaperi. Pachavazve nerugare.—VaEf. 1:9, 10.
5. Chii chatingaita kuti titsigire Jehovha panyaya yeuchangamire?
5 Uchangamire hwaMwari hucharevererwa uye kutonga kwaSatani nevanhu kuchakundikana zvachose kwobva kwabviswa. Mwari ndiye achange ava kutonga achishandisa Umambo hwaMesiya uye vaya vakavimbika vachange varatidza kuti vanhu vanogona kutsigira kutonga kwaMwari. (Isa. 45:23, 24) Unodawo here kuva mumwe wevanhu ivavo vachange varatidza kuti vakavimbika pakutsigira uchangamire hwaJehovha? Hapana mubvunzo kuti unoda. Kuti tive vanhu vakavimbika, tinofanira kuramba takaisa pfungwa panyaya iyoyo inokosha tonyatsonzwisisa kukosha kwayo.
KUREVERERWA KWEUCHANGAMIRE KUNOKOSHA ZVAKADINI?
6. Kurevererwa kweuchangamire hwaJehovha kunokosha zvakadini?
6 Sezvambotaurwa, kurevererwa kweuchangamire hwaJehovha inyaya inokosha inobata-bata vanhu. Kunokosha kupfuura kuwana kwedu mufaro. Izvozvo zvinoreva here kuti kuponeswa kwedu hakukoshi kana kuti Jehovha haana hanya nesu? Kwete. Nei tichidaro?
7, 8. Kurevererwa kweuchangamire hwaMwari kuchatibatsira sei?
7 Jehovha anoda vanhu uye anovakoshesa zvikuru. Akazvipira kushandisa ropa reMwanakomana wake kuti tikwanise kuponeswa. (Joh. 3:16; 1 Joh. 4:9) Kudai Jehovha aizokundikana kuzadzisa zvaakavimbisa, Dhiyabhorosi aizova nechikonzero chekutaura kuti Mwari murevi wenhema anonyima vanhu zvinhu zvakanaka uye anotonga zvisina kururama. Zvaizotsigirawo vaya vanopikisa Mwari avo vanotsvinya vachiti: “Uku kuvapo kwake kwakapikirwa kuri kupiko? Chokwadi, kubvira pazuva rakarara madzitateguru edu murufu, zvinhu zvose zviri kuramba zvakaita sezvazvakanga zvakangoita kubvira pazvakatanga kusikwa.” (2 Pet. 3:3, 4) Saka Jehovha achaita kuti kuponeswa kwevanhu vanoteerera kubatanidzwewo pakurevererwa kweuchangamire hwake. (Verenga Isaya 55:10, 11.) Uyewo Jehovha anoratidza uchangamire hwake zvine rudo. Saka tinogona kuva nechokwadi chekuti acharamba achida uye achikoshesa vashumiri vake vakavimbika.—Eks. 34:6.
8 Patinobvuma kuti uchangamire hwaJehovha hunokosha, tinenge tisiri kuti kuponeswa kwedu hakukoshi kwaari kana kuti haana hanya nesu. Chiripo ndechekuti tinenge tichinzwisisa kuti nyaya yeuchangamire inokosha kupfuura kuponeswa kwedu. Tinofanira kuva nemaonero iwayo kana tichizoramba takaisa pfungwa panyaya iyi inokosha totsigira kutonga kwaJehovha kwakarurama.
JOBHO AKACHINJA SEI MAONERO AKE?
9. Satani akatii nezvaJobho? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
9 Bhuku raJobho, iro riri rimwe remabhuku eBhaibheri akatanga kunyorwa, rinoratidza zvakajeka kuti zvakakosha kuva nemaonero akanaka panyaya yeuchangamire hwaJehovha. Mubhuku iri, tinodzidza zvakataurwa naSatani zvekuti kana Jobho akatambura zvakanyanya, aizoramba Mwari. Satani akatoudza Mwari kuti atambudze Jobho. Jehovha haana kuita izvozvo asi akabvumira Satani kuti aedze Jobho achiti: “Zvinhu zvose zvaainazvo zviri muruoko rwako.” (Verenga Jobho 1:7-12.) Pasina nguva, Jobho akarasikirwa nevaranda vake, pfuma yake uye vana vake 10. Satani akamutambudza nenzira yaiita sekuti Mwari pachake ndiye ainge azvikonzera. (Job. 1:13-19) Zvadaro, Satani akaita kuti Jobho ave nechirwere chinorwadza uye chinosemesa. (Job. 2:7) Kutambura kwaJobho kwakawedzerwa nemashoko anoodza mwoyo akataurwa nemudzimai wake pamwe chete nevarume vatatu vaiva shamwari dzenhema.—Job. 2:9; 3:11; 16:2.
10. (a) Jobho akaitei chairatidza kuti ainge akaperera kuna Mwari? (b) Jobho akaita chikanganiso chipi?
10 Zvakazoguma nei? Zvakazobuda pachena kuti zvakataurwa naSatani zvaiva zvenhema. Jobho akaramba akavimbika kuna Mwari. (Job. 27:5) Asi Jobho akambova nemaonero asina kunaka. Akanga ava kunyanya kufunga nezvekuratidza kuti ainge akarurama, uye aitoda kuti Mwari amuudze chikonzero chaiita kuti atambure. (Job. 7:20; 13:24) Tichitarisa kutambura kwaainge aita, tingaona sekuti maonero aJobho ainge asina kuipa. Asi Mwari akaona kuti aifanira kugadzirisa mafungiro aJobho. Jehovha akamuudza kutii?
11, 12. Jehovha akabatsira Jobho kuti anzwisise chii, uye Jobho akaitei?
11 Mashoko ari muzvitsauko 38 kusvika ku41 zvebhuku raJobho akataurwa naMwari kuna Jobho. Hapana paanomuudza kuti nei aitambura. Chinangwa chikuru chemashoko ake chaisava chekumutsanangurira kuti nei aitambura, sekunge kuti Mwari aitofanira kuzvichenura. Asi Jehovha aida kuti Jobho aone kuti aiva mudiki zvakadini kana achienzaniswa naMwari. Uye akabatsira Jobho kuti aone kuti paiva nenyaya dzaikosha kupfuura matambudziko aJobho. (Verenga Jobho 38:18-21.) Izvi zvakabatsira Jobho kuti agadzirise maonero ake.
12 Jehovha airatidza kusava nemutsa here paakatsiura Jobho saizvozvo pashure pekunge atambura zvikuru kudaro? Mwari aisaratidza izvozvo uye Jobho haana kumbofunga kudaro. Pasinei nedambudziko rake, Jobho akatanga kutaura achiratidza kuti akanga abatsirwa nezvaakanga audzwa naMwari. Akatotaura kuti: “Ndiri kuzvidemba, ndapfidza ndiri muguruva nemadota.” Izvi zvinoratidza kuti kutsiurwa kwaakaitwa naJehovha kwakamubatsira. (Job. 42:1-6) Jobho akanga ambotsiurwawo naErihu uyo aiva mudiki kwaari. (Job. 32:5-10) Pashure pekunge Jobho abvuma kutsiurwa ndokugadzirisa maonero ake, Jehovha akazivisa vamwe kuti aifarira Jobho nekuti akaramba akatendeka paaiva mumatambudziko.—Job. 42:7, 8.
13. Kutsiurwa kwakaitwa Jobho naJehovha kwaigona kuramba kuchimunyaradza sei pashure pekunge miedzo yake yapera?
13 Kutsiurwa kwakaitwa Jobho naJehovha kwakaramba kuchimubatsira kunyange miedzo yake payainge yapera. Zvakadaro sei? Kunyange zvazvo “Jehovha akazokomborera makore okupedzisira aJobho kupfuura okutanga,” zvinofanira kunge zvakatora nguva kuti anyatsonaya. ‘Akazova nevanakomana vanomwe nevanasikana vatatu.’ (Job. 42:12-14) Zviri pachena kuti Jobho aisuwa vana vake vakaurayiwa naSatani. Zvichida akaita nguva achinyatsoyeuka kutambura kwaakaita. Kunyange kana kuri kuti akazonzwisisa kuti nei akatambura, anogona kunge aimbofunga kuti nei aifanira kutambura zvakadaro. Pasinei nezvaiva mupfungwa dzake, aigona kufungisisa kutsiurwa kwaakaitwa naMwari. Kuita izvozvo kwaigona kumubatsira kuti agadzirise maonero ake uye izvozvo zvaizomunyaradza.—Pis. 94:19.
Tinokwanisa here kubvisa pfungwa pamatambudziko edu todziisa panyaya inokosha? (Ona ndima 14)
14. Tingadzidzei pane zvakaitika kuna Jobho?
14 Nyaya yaJobho inogonawo kutinyaradza uye kutibatsira kugadzirisa maonero edu. Jehovha akaita kuti inyorwe “kuti tirayiridzwe, kuti nokutsungirira kwedu uye nokunyaradza kunobva muMagwaro, tive netariro.” (VaR. 15:4) Tinodzidzei panyaya iyi? Chidzidzo chinokosha ndeichi: Ngatisambofa takanyanya kufunga nezveupenyu hwedu zvekuti tinokanganwa nyaya iyi inokosha yekurevererwa kweuchangamire hwaJehovha. Uye ngatinzwisisei kuti zvatinofanira kuita panyaya iyi inokosha zvinosanganisira kuramba takavimbika sezvakaita Jobho, kunyange patinenge tichitambura zvikuru.
15. Kuramba kwedu takatendeka patinoedzwa kunobatsirei?
15 Nei zvichinyaradza kuti tifunge nezvekukosha kwekuti tirambe takatendeka? Nekuti matambudziko edu ane zvaanobatsira. Matambudziko edu haaratidzi kuti Mwari akatitsamwira asi anotipa mukana wekuratidza kuti tinotsigira uchangamire hwaMwari. (Zvir. 27:11) Kutsungirira kwedu kunoita kuti ‘titenderwe’ uye kunosimbisa tariro yedu. (Verenga VaRoma 5:3-5.) Nhoroondo yaJobho inoratidza kuti “Jehovha ane rudo rukuru uye ane ngoni.” (Jak. 5:11) Saka tinogona kuva nechivimbo chekuti achatipa mubayiro pamwe chete nevanhu vese vanotsigira uchangamire hwake. Kuziva izvi kunotibatsira ‘kutsungirira zvizere nemwoyo murefu uye nemufaro.’—VaK. 1:11.
KURAMBA WAKAISA PFUNGWA PAUCHANGAMIRE HWAJEHOVHA
16. Nei tichifanira kuramba tichizviyeuchidza nezvekukosha kwekurevererwa kweuchangamire hwaJehovha?
16 Zvingasava nyore kuramba takaisa pfungwa pakurevererwa kweuchangamire hwaJehovha. Dzimwe nguva matambudziko edu angaita seachatikurira. Kunyange matambudziko madiki anogona kuita seakakura chaizvo kana tikaramba tichingoafunga. Saka tinofanira kugara tichizviyeuchidza nezvekukosha kwekutsigira uchangamire hwaMwari patinenge tiri mumatambudziko.
17. Kugara tichiita basa raJehovha kunotibatsira sei kuti tirambe takaisa pfungwa panyaya inokosha?
17 Kugara tichiita basa raJehovha kunogona kutibatsira kuti tirambe takaisa pfungwa panyaya inokosha. Semuenzaniso, imwe hanzvadzi inonzi Renee iyo yakaita stroke, yaigara ichirwadziwa uyewo yaiva nekenza. Paairapwa pazvipatara zvakasiyana-siyana, aiparidzira vashandi vepo, vamwe varwere uyewo vanhu vaiuya kuzoona varwere. Pane chimwe chipatara, akaparidza kwemaawa 80 mumavhiki maviri nehafu chete. Kunyange paainge ava pedyo nekufa, Renee akaramba achiyeuka uchangamire hwaJehovha. Izvozvo zvakaita kuti asanyanya kurwadziwa.
18. Zvakaitika kune imwe hanzvadzi zvinoratidza sei kuti kutsigira uchangamire hwaJehovha kunobatsira?
18 Tinodawo kuramba takaisa pfungwa pauchangamire hwaJehovha patinosangana nematambudziko ezuva nezuva. Jennifer akaita mazuva matatu ari panhandare yendege achimirira ndege yaienda kwaaigara. Ndege dzaifanira kuenda ikoko dzaingokanzurwa. Sezvo aiva ega uye akarukutika, aigona kupedzisira asingachafari. Asi akanyengetera kuti akwanise kuparidzira vamwe vaiva mudambudziko rakafanana nerake. Chii chakazoitika? Akaparidzira vanhu vakawanda uye akapa vanhu mabhuku akawanda. Anoti, “Ndakaona kuti Jehovha akandikomborera pasinei nezvandaisangana nazvo uye akandipa simba rekuti ndikwanise kukudza zita rake.” Akaramba akaisa pfungwa pakuita zvinodiwa naJehovha.
19. Vanamati vechokwadi vanozivikanwa nechii?
19 Chitendero chechokwadi chakasiyana nechenhema pakuti chinozivikanwa nekukoshesa uchangamire hwaJehovha. Vanhu vaMwari vagara vachitsigira uchangamire hwake. Saka mumwe nemumwe wedu anofanira kurambawo achitsigira uchangamire hwaJehovha.
20. Jehovha anoona sei zvaunoita pakutsigira uchangamire hwake?
20 Ziva kuti Jehovha anokoshesa zvaunoita pakutsigira uchangamire hwake kuburikidza nekumushumira wakavimbika uye kutsungirira matambudziko. (Pis. 18:25) Nyaya inotevera ichakurukura kuti nei uchifanira kutsigira uchangamire hwaJehovha nemwoyo wese uye kuti ungazviita sei.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ramba Wakaisa Pfungwa Dzako Panyaya Inokosha